Tonizia: Miatrika Fitsarana Miaramila Ny Mpanolotsaina Fahinin’ny Filoha Noho Ny Fanakianan’ny Tafika · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Miatrika Fitsarana Miaramila Ny Mpanolotsaina Fahinin'ny Filoha Noho Ny Fanakianan'ny Tafika	Voadika ny 27 Aogositra 2012 8:18 GMT
Zarao: Niatrika fitsarana miaramila i Ayoub Massoudi, mpanolotsaina fahiny ny Filoha Toniziana Moncef Marzouki, noho ny fanambaràny momba ny Praiminisitra Libiana teo aloha, Baghdadi Mahmoudi (fony Gaddafi).
Noho ny tahotra ny tsy hahazoan'i Mahmoudi fitsarana tsy mitanila any Libya, nolavin'ny filoha Moncef Marzouki ny fangatahana hampodiana azy. Kanefa, nalefan'ny governemanta tarihan'i Praiminisitra Hamadi Jebali nody i Mahmoudi tamin'ny 24 Jona 2012, tsy nisy fampilazana natao tamin'ny filoha izay nanao fitsidihana tany atsimon'i Tonizia tamin'io andro io, narahan'i Rachid Ammar [Mpitarika ambony ao amin'ny tafika mitam-piadiana Toniziana] ary i Abdelkrim Zbidi [Minisitry ny Fiarovana]
Tanaty resadresaka iray tao amin'ny fahitalavitra, tamin'ny 15 Jolay, ary nalefan'ny fantsom-pahitalavitra tsy miankina Attounisia TV, nofaritan'i Massoudi ho ‘famadihana ny fitondrana’ ny dingana narahana tamin'ilay fampodiana, satriai Ammar sy Zbidi izay “efa samy nahafantatra momba ilay fampodiana, tamin'io fotoana io, sy ny mombamomba azy rehetra… dia tsy nisy niteny na indraim-bava aza, ary tsy nampahafantatra ny filoha izay Filoha Ambonin'ny Tafika.”
“Fahafahana ho an'i Ayaoub Massoudi” “tsy tsipika mena akory ny tafika” sary avy amin'ny Nawaat.org
Taorian'ny fitarainana iray nataon'ny Jeneraly Rachid Ammar momba azy, Ayoub Massoudi dia niatrika fiampangàna ho “manohintohina ny haja sy ny voninahitry ary ny maoralin'ny tafika” sady “miampanga tsy misy porofo ireo mpiasam-panjakana”
Na dia tsy any ambadiky ny fefy vy aza i Ayoub, dia noraràna kosa izy tsy ho afaka mivezivezy ivelan'ny firenena. Ny 16 Aogositra, nosakanan'ireo manampahefana tao amin'ny seranam-piaramanidina tao amin'ny Tunis Carthage Airport izy tsy hiondrana tanaty fiaramanidina hamonjy ny fianakaviany any Paris.
Chayma Mehdi mibitsika hoe [fr]:
#AyoubMassouadi n'a pas été arrêté certes, n’empêche #FreeAyoub. Parce-qu’on est censé être libre de quitté ou non notre pays..
Tsy nofonjaina na dia izany aza i Ayoub Massoudi. Kanefa, #AvotsoryAyoub #FreeAyoub, satria malalaka isika hisafidy handao na tsia ny firenentsika.
Malek Khadhraoui, talen'ny fanontàna ao amin'ny Nawaat.org, mitatitra hoe [fr] :
Tsy nahazo taratasy fampilazana azy momba ny fitoriana nataon'ny tafika i Ayoub Massoudi.
“Famadihana ny Fanjakana” tsy “Famadihana Tanindrazana”
Ny bilaogy ifanotronana, nahazo loka fankasitrahana, Nawaat.org dia nahazo dika mitovin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Jeneraly Ammar momba ny raharahan'i Massoudi. Ramzi Bettibi (atao koa hoe Winston Smith) mitatitra hoe [ar] :
Nandritra ny fakàna am-bavny, niaiki ny Jeneraly Rachid Ammar tao anatin'ny fijoroany vavolombelona fa nahafantatra tokoa mikasika ilay fanapahan-kevitra hampody an'i Baghdadi Mahmoudi, ary tsy nampahafantatra ny Filoha. Tetsy ankilany, nivandravandra be ny hadisoana nataon'ireo mpitaraina…Nitaraina ny Jen. Ammar fa hoe nampangain’ [i Massoudi nandritra ilay tafatafa tao amin'ny fahitalavitra] ho “namadika tanindrazana”, raha i Massoudi etsy andaniny miampanga azy sy ny Minisitry ny Fiarovana ho “namadika n y Fanjakana”
Bettibi manampy hoe :
Araka ny lazain'ny mpisolovva iray, tsy manan-kery araka ny lalàna ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Jen. Rachid Ammar satria izy tsy nanao fianianana talohan'ny nanaovany izany. Nosakanana tsy hiaraka hankalaza ny Eid tamin'ny fianakaviany tany Frantsa noho ny dingana ara-pitsarana tsy manan-kery ve izany i Ayoub Massoudi, ilay mpanolotsaina teo aloha ny filoham-pirenena ?
Hitohy amin'ny herinandro ny fitsaràna
Mpanao hetsi-panoherana nijoro teo ivelan'ny Fitsarana Miaramila tao Tunis ho fanohanana an'i Massoudi. Sary avy amin'ny Nawaat.
Ny 22 Aogositra no natao ny fihainoana fanindroany mikasika ny raharaha Massoudi ao amin'ny Fitsarana Miaramila Maharitra ao Tunis. Hitohy amin'ny 30 Aogositra ny fitsaràna. Nawaat mitatitra [fr] ao amin'ny pejy Facebook-ny :
Vao avy nifarana indrindra ny fihainoana fanindroany an'i Ayoub Massoudi. Ny mpitsara mpanao famotorana dia nanondro ny 30 Aogositra 2012 ho fihainoana fanintelony. Ho olona afaka hiseho eo anoloan'ny fitsaràna i Massoudi saingy mbola mizaka hatrany ny fanakanana azy tsy hahazo mivezivezy ivelan'ny firenena
Ny fametraham-pialàn'i Ayoub Massoudi
Ilaina ny manamarika fa nametra-pialàna i Ayoub Massoudi tamin'ny 28 Jona, taorian'ny naha-mpanolotsaina azy tamin'ny lafiny serasera ny Filoha Marzouki nandritra ny folo volana. Ilay fanapahan-kevitra dia noraisiny ho fanoherana ny lazain'i Massoudi ho “fanilikilihana” azy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny kabinetran'ny filoha.
Nambarany tao anatin'ny bilaoginy ny fametraham-pialàany, tanaty lahatsoratra [fr] iray mitondra ny lohateny hoe “Malalaka ihany aho nony farany” (Free at last). Hoy izy nanoratra :
Nentanin'ny fanajàko fatratra ny Revolisiona Toniziana, ny Fanjakana, ny Toniziana ary ny mpandoa hetra rehetra izay mandoa ny karamako noho ny asa izay tsy efako akory, dia ambarako ny fametrahako fialàna, amin-kalalahana tanteraka, ary tsy nisy teritery na tsindry. Na izany aza, Andriamanitra mahalala hoe impiry aho no efa nanandrana
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraAfef Abrougui
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 1 andro izayPalestinaMitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza
4 andro izayIranZanakalahin'ny Mpanohitra Mpitarika Ny Hetsika Maitso Manohana Ny Fifanarahana Ara-nokleary Iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaTonizia